Aniga oo ah (15 sanno jir) waxaan jeclahay in aan u diro wiil saaxiibkayga ah sawir qaawan oo aniga ah. Sawirka aniga waxaa iga qaawan naasaha mana xirni wax rajabeeto ah. Gabdhaha saaxiibadayda ahi waxay igu dhahaan waa in aanan sidaasi samaynin. Ma jirtaa sabab iga dhagaysa in aanan sidaasi samaynin?
Du bist hier: Startseite / Aniga oo ah (15 sanno jir) waxaan jeclahay in aan u diro wiil saaxiibkayga...
Inbaddan oo kamid ahi gabdhaha iyo wiilasha waxay jecelyihiin in ay ka dhigaan lammaanahooda mid faraxsan.
Waxay jecelyihiin in ay ugu muuqdaan ayaga kuwo soo jiidasho leh.
Si kastaba, waxaa jira dhowr waxyaabood oo ay tahay in aad oggaatid.
Si cad: waa in aad uga fikirtaa qofka aad u diraysid sawirka noocaan ah.
Waa arin khaas ah waxayna muujinaysaa in aad lammaanahaaga ku qabtid kalsooni buuxda.
Sidoo kale waxaa khasab kugu ah in aad nafsadaada weydiisid:
Lammaanahaaga ma doonayaa sawirka?
Waa in aadan u dirin qof aanan sawirka doonaynin in uu haysto.
Waxay noqon kartaa dembi xad gudub.
Midkaan waa adiga sawirkaaga; waxaadna go’aansan kartaa qofka arki kara iyo qofka aan arki karin.
Kadib marka aad dirtid adigu ma oggaan kartid waxa lagu samaynayo sawirka.
Si taxadar leh uga fikir: maku kalsoontahay qofka aad u diraysid sawirka?
Waa in aanan qofna u dirin qofkale sawirkaaga adiga oo aan midaasi oggolaanin.
Haddii uu qof ku xad gudbo kalsoonidaan haddaba markaasi waa qof dembi ku dhacay.
Haddii aad u baahantahay caawimaad dheeraad ah oo arintaan ku saabsan waxaad qof kala xiriiri kartaa halkan:
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-09-29 12:10:472017-09-29 12:10:47Aniga oo ah (15 sanno jir) waxaan jeclahay in aan u diro wiil saaxiibkayga ah sawir qaawan oo aniga ah. Sawirka aniga waxaa iga qaawan naasaha mana xirni wax rajabeeto ah. Gabdhaha saaxiibadayda ahi waxay igu dhahaan waa in aanan sidaasi samaynin. Ma jirtaa sabab iga dhagaysa in aanan sidaasi samaynin?